Quakes | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
February 9, 2010 — mmweather
ပြီးခဲ့သည့် (၁)ရက်အတွင်း၊ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ပြင်းအား ၂.၅ နှင့် အထက်ရှိ မြေငလျှင်လှုပ်ခတ်ခြင်းများနှင့် ပြီးခဲ့သည့် (၇)ရက်အတွင်း၊ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ပြင်းအား ၅ နှင့် အထက်ရှိ မြေငလျှင်လှုပ်ခတ်ခြင်းများကို USGS website မှ တိုက်ရိုက် ရယူ၍ Widget များဖြင့် mmweather ၏ ကမ္ဘာ့မြေငလျှင်လှုပ်ခတ်မှုဆိုင်ရာသတင်းများ စာမျက်နှာ တွင် တင်ပြထားပါသည်။
မြေငလျှင်လှုပ်ခြင်းအား ယနေ့ထက်တိုင် နေရာအတိအကျ၊ မြေပြင်/ရေပြင်အောက် အနက် အတိအကျ၊ အချိန်အတိအကျနှင့် ပြင်းအားအတိအကျ တို့ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော် လူသားတို့၏ အသက်ပေါင်းများစွာကို ရုတ်တရက် နှုတ်ယူသွားတတ်သည့်အပြင် အိုးအိမ်စည်းစိမ် အမြောက်အများကိုလည်း ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းကြီးမားသည့် ငလျှင်လှုပ်ခတ်မှု သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို လျစ်လျူရှုထား၍လည်းမရနိုင်ပါ။
နိုင်ငံတကာရှိမြေငလျှင်လှုပ်ခတ်မှုများ၊ မြေငလျှင်လှုပ်ခတ်မှုပြင်းထန်သော/မကြာခဏလှုပ်တတ်သော ဒေသများတွင် ငလျှင်လှုပ်ခတ်လာပါက ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒဏ်ကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအစိုးရများနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ NGO များက မည်သို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို မျက်ချေမပြတ်လေ့လာနေကြရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထိုသို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလားတူ ငလျှင်ပြင်းများလှုပ်ခတ်သည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မျိုး ကြုံတွေ့လာရလျှင် မည်သို့မည်ပုံ ဆောင်ရွက်သင့်သည်၊ ကာကွယ်မှုများကို မည်သို့မည်ပုံ ဆောင်ရွက်ထားသင့်သည် စသည်ဖြင့် ဗဟုသုတ ရှာမှီးနိုင်ကြစေရန်ရည်ရွယ်ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
Posted in Education, Quakes. Tags: earthquake, Education. LeaveaComment »
January 18, 2010 — mmweather
လူပေါင်း ၁၃ဝဝဝ ခန့် သေဆုံးကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ အာဏာပိုင်များက လူ့အသက်ပေါင်း ၅ သောင်းထက်မနည်း သေဆုံးလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြပါသည်။ Carrefour, Gressier နှင့် Leogane မြို့များတွင် အဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ကြရပြီး လူဦးရေ ၁၃၄ဝဝဝ ရှိသည့် Leogane မြို့လေးတွင် လူနေအဆောက်အဦ ၈ဝ% မှ ၉ဝ% အထိ ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ဟေတီငလျှင်နှင့်ပတ်သက်သည့် ကုလသမ္မဂ္ဂ OHCA ၏ ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အစီရင်ခံစာအား PDF ဖြင့် ရယူလေ့လာနိုင်ပါသည် –
ဟေတီငလျှင်နှင့်ပတ်သက်သည့် ကုလသမ္မဂ္ဂ အစီရင်ခံစာ (Download)
• Fuel for humanitarian operations will only last2to3more days before operations will be forced to cease. A fuel distribution mechanism is required urgently.
• 27 Urban Search and Rescue teams are deployed across priority locations with approximately 1,500 rescue workers and 115 dogs. There have been 58 live rescues so far by these teams.
• A joint UNDAC/EU/WFP assessment found 80-90 percent of the buildings destroyed in Leogane and 40-50 percent in Carrefour and Gressier.
• Priorities for assistance continue to be search and rescue, medical services, shelter, food and water.
• IOM estimates that 200,000 families (up to one million people) are in need of immediate shelter and non-food assistance.
Posted in Education, Quakes. LeaveaComment »